पुरुषलाई महिलाका यी ७ अंगले भुतुक्कै पार्छ ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पुरुषलाई महिलाका यी ७ अंगले भुतुक्कै पार्छ !
महिला र पुरुष एकअर्काप्रति आकर्षित हुने प्राकृतिक नियम नै हो । जीव विज्ञानअनुसार महिला र पुरुषको मस्तिष्कमा विपरीत लि’ङ्गीप्रति आकर्षक गर्ने गुणहरु हुन्छन् त्यसैले गर्दा बिपरित लिं’गीप्रति अाकर्षण हुन्छ ।
तसर्थ किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकअर्काप्रति आकर्षित हुने सामान्य मान्नुपर्छ । पुरुष र महिलाको प्राथमिकता भने फरक हुन्छ । पुरुष र महिलाका लागि यौ का आकर्षण फरक फरक अं गमा हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
पुरुषले महिलाको अनुहार, व’क्षस्थल, ना’इटो, कम्मर, आँखा, ओठ, हि’प लगायतका ७ अं ग बढी मन पार्छन् भने महिलाले पुरुषको सर्लक्क परेको पेट, चौडा छाती, पाखुरा, ओठ र आँखा मन पार्छन् ।
यो पनि- यस कारण दक्षिण भारतीय स्टारहरु बलिउडमा आउन ड राउँछन्
थुप्रै बलिउड सिनेमा निर्माता-निर्देशकले प्रस्ताव गर्दा पनि उनीहरू सिनेमामा काम गर्न हिच्किचाउने गर्छन् यसको जवाफ हालै रिलिज भएको ‘साहो’मा देखिन्छ।
दोश्रो कारण स्टारडम र प्रभाव हो। आफ्नो भाषाको सिनेमामा स्टारडमको मजा लिइरहेका उनीहरूलाई अर्को भाषाको सिनेमामा पनि जम्नु सजिलो हुँदैन। सफल भए त राम्रो हो तर असफल हुँदा त्यसको घाटा उनीहरूको भाषाको सिनेमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यस्तोमा उनीहरू हिच्किचाउने भए नै। भाषाका अलावा सिनेमा छनौटमा पनि उनीहरूका लागि चुनौति हो।